Ny antony lehibe mahatonga izany dia ny fifandraisana rehefa milalao amin'ny ankizy hafa. Rehefa tsy maintsy miady amin'ny rivotra madio ireo tanora dia mitady vahaolana ny ati-doha. Ny sela ao amin'ny ati-doha dia miteraka fitaomana ny rafitra fitadidiana iray manontolo. Zava-dehibe amin'ny fahaizana mifantoka izy ireo.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. Jolay 2021 15. Jolay 2021 Sokajy Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena, Trano sy tranoKeywords bewegen, mihetsika, ankizy, Telozoro mananika, fiakarana fiakarana, miakatra, mandroso bebe kokoa, hanao fanatanjahan-tena bebe kokoa, toetra, Fanatanjahantena
indray Lahatsoratra taloha: Ankizy - mianatra resy amin'ny lalao
more Lahatsoratra manaraka: Maninona ny ankizy no tsy maintsy milalao